किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन् अरबेयिन महिलाहरु ? यस्ता छन कारणहरु !
प्रकाशित मिति : July 11, 2019
“सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ ।” हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ ।सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ ।
अरेबियन महिलाहरु ठुला आँखा र आकर्षक हेराइका कारण पनि प्रख्यात छन् । यी महिलाहरु धेरैजसो बुर्का भित्र रहन मन पराउँछन् । तर नकाबमा भित्रबाट देखिएको सुन्दर आँखाले नै उनीहरुको सुन्दरताको बयान गर्छ । अरेबियन महिलाको सुन्दरता प्राकृतिक मात्र नभएर आफ्नो छालाप्रतिको हेरचाह पनि प्रमुख कारण हो ।अरबियन महिलाहरु आफ्नो सुन्दरतालाई यथावत राख्नका लागि स्पेशल स्किन केयर अपनाउँछन् । यसको साथै स्वस्थ्यकर खाना खाने गर्छन् । अरेबियन महिलाहरु आफ्नो सुन्दरताको हेरचाह कसरी गर्छन् त ?
नरम र चम्किलो छालाको लागि अरेबियन महिलाहरु विशेष किसिमको तेलले दिनहुँ मसाज गर्नुको साथै शरीरमा स्टीम दिने गर्छन् । यसको साथै तातो पानीमा शरीरलाई घण्टौं डुबाएर राख्ने गर्छन् । प्राचिनकालमा नूरजहाँलाई गुलाब र राजकुमारी डायनालाई एभोकाडो अत्यन्तै मन पथ्र्यो । प्राचिन महारानीहरुको सुन्दरताको रहस्य नै घरमा बनेका सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोग थियो । यहि कुरालाई आज पनि अरेबियन महिलाहरु आत्मासाथ गर्छन् । अरेबियन महिलाहरु सुन्दरताको बिषयमा निकै संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरु सौन्दर्य प्रसाधन पनि केवल अग्र्यानिक मात्र प्रयोग गर्छन् ।
सुर्यको किरणबाट आफ्नो छालालाई बचाउनका लागि अरेबियन महिलाहरु बुर्का लगाउने गर्छन् । बुर्का लगाउँदा छालालाई सुर्यको हानिकारक किरण संग-सँगै प्रदूषण र धुलोबाट पनि बचाउँछ ।बुर्का बाहेक आफ्नो छालालाई सुर्यको किरणबाट बचाउनका लागि सनस्क्रिनको प्रयोग गर्छन् । अरबमा सनबाथको पारम्परिक संस्कृति रहि आएको छ । आज पनि अरेबियन महिलाहरु आफ्नो सुन्दरतालाई कायम राख्नका लागि प्राचिनदेखि चलि आएको सनबाथ लिन रुचाउँछन् ।
उनीहरु आँखाको मेकअप गर्न निकै रुचाउँछन् । त्यसैले गाजल यिनीहरुलाई अत्यन्त पि्रय लाग्छ । आँखाको सुन्दरता बढाउनका लागि अरेबियन महिलाहरु घरमा बनेको गाजल लगाउने गर्छन् ।अरेबियन महिलाहरु हलावा नामक घरमा बनेका व्याक्सको प्रयोग गर्छन् । यिनीहरुलाई अनावश्यक रौं आएको मन पराउँदैनन् ।
धेरै कम महिलाले मात्र कठोर हेल्दी डाइट फलो गर्न सक्छौ । चिल्लो र स्वादिलो खाना देख्नासाथ हामी खान थालिहाल्छौ । तर अरेबियन महिलाहरु हेल्दी डाइट खाने गर्छन् । खानामा फलफूल र सागपात खाने गर्छन् ।कपालको सुन्दरतामा बिशेष ध्यान दिने गर्छन् । आफ्नो कपाललाई सुन्दर र स्वथ्य बनाउनको लागि विशेष प्रकारको अरेबियन तेलको प्रयोग गर्छन् ।
गुलाबजललाई प्राचिन कालदेखि नै सौन्दर्य प्रसाधनको रुपमा लिइइै आइएको छ । गुलाबजलले नेचुरल एस्टि्रजेन्टको काम गर्छ । त्यसैले मध्यपूर्वी देशहरुमा त यो सबैभन्दा पुरानो सुन्दरताको राज मानिन्छ । गुलाबजलले छाला बिग्रनबाट बचाउनुको साथै छाला चाउरीनबाट बचाउँछ । गुलाबजललाई जमाएर आईस क्युब बनाएर अनुहार र गर्दनको वरिपरी रगड्नु पर्छ । यसो गर्दा अनुहार र गर्दन कसिलो हुनुको साथै ग्लो पनि आउँछ ।